KDE Plasma: Kedu ihe ọ bụ na kedu ka esi etinye ya na DEBIAN 10 na MX-Linux 19? | Site na Linux
KDE Plasma: Kedu ihe ọ bụ na otu esi etinye ya na DEBIAN 10 na MX-Linux 19?
Anyị na-ebipụta akụkọ kwa oge site na Plasma nke KDE (5.17, 5.16, 5.15, 5.14, n'etiti ndị ọzọ), ma ọ bụ na ụfọdụ isiokwu na-egbu ya, ma ọ bụ a na-akpali ngwa maka kwuru Ebe obibi Desktọpụ.
Na nke a, anyị ga-elekwasị anya na Kedu ihe ọ bụ? y Kedu ka esi etinye?. N'ezie, mesie ike ihe dị ugbu a DEBIAN GNU / Linux metadistribution, na nke kachasị ọhụrụ mbipute, na nọmba 10, aha koodu Buster. Nke bụkwa ugbu a ihe ndabere maka Mwepụ MX-Linux 19 (ujo ojoo).
KDE Plasma Dị ka ọtụtụ ndị ọzọ Ebe Desktọpụ (DE) na-eme ka ndu na ya GNU / Linux Sistemụ nrụọrụ, Ọ bụ otu ihe ochie data, nke karịrị oge na-otu nke kasị eji, maka ịbụ mara mma, ìhè, zuru ezu na ọtọ.
Site na ya ugbu a 5 mbipute, bu aha ejiri mara plasma. Ma otu ihe GNOME abịa dị ka Gburugburu Ebe Obibi ndabara (ndabere) nke ọtụtụ GNU / Linux Distros.
1 Ihe niile gbasara Plasma
1.2 Uru na ọghọm ya
1.3.1 Iji usoro iwu ihe aga-eme site na eserese eserese eserese (GUI)
1.3.2 Iji usoro iwu ihe aga-eme site na Usoro Nweta Iwu (CLI)
1.3.3 Wụnye obere ngwugwu ndị dị mkpa ozugbo site na CLI
1.3.4 Ndị ọzọ dị iche iche nke ntinye 2 site na CLI
1.3.5 Omume ma ọ bụ mmeju
Ihe niile gbasara Plasma
Otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa nwere ike ime ka ọ pụta ìhè na nke a Ebe obibi Desktọpụ anyị nwere ike ikwu ihe ndị a:
KDE na ya 1.0 mbipute wepụtara na ụbọchị nke 12 1998 XNUMX na na nke ugbu a 5 mbipute, nke a maara dị ka KDE Plasma wepụtara na 15 2014 XNUMX.
Ọ bụ ugbu a Ebe obibi Desktọpụ ezubere inye a ọhụrụ ikiri ahụmahụ maara nke ọma ma dịkwa mfe iji maka onye ọrụ ọ bụla na ihe ọ bụla GNU / Linux nkesa.
Site na mbido, o lekwasịrị anya ikwado onye ọrụ iji na ngalaba nke ọrụ niile, atụmatụ na ngwa mejupụtara ya, site na a ọdịdị dị ọcha na ọgụgụ akwụkwọ dị mma (ngosi), n'ụzọ dị otú ahụ, iji nye ahụmịhe mmekọrịta onye ọrụ mmekọrịta, modernized na Cleaner.
Aha gị (KDE) bụ acronym maka "Kool Ebe nchekwa na Desktọpụ". Ihe mejupụtara ya kpamkpam Free Software na Open Source (Free na Open Source Software - Akpa).
Ọ bụ akụkụ nke Ọrụ KDE nke dabere na Tù KDE. Ọ dabere na toolkit QT.
Ọ nwere magburu onwe mwekota na X Window nkesa ngosi ihe ngosi, ma nwee ezigbo nkwado na mwekota na Ugwuoba, ruo n'ókè ọ na-enye ohere iji fractional akụkụ, ma ọ bụ n’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ọ na-enye ohere ịhazigharị nha nke ihe niile dị na desktọpụ, nke windo ahụ, nke akara ókwú na akụkụ ahụ n’ụzọ zuru oke maka ileba anya na HiDPI.
N'ime njirimara ndị pụtara ìhè ugbu a bụ, ya mara mma ma na-arụ ọrụ Ụlọ na nnukwu usoro okike nke ngwa ya. Na agbanyeghị nke ahụ, ọ bụ dị oke ọkụ ma chọọ ihe ole na ole na-arụ ọrụ optimally.
Ugbu a anụ version nke GNOME na Desktọpụ Environment bụ nọmba mbipute 5.17.
una ndekọ ndekọ siri ike akụkọ ihe mere eme.
Otu ezu ọma ahaziri akwụkwọ na emelitere online.
Ihe magburu onwe, zuru ezu na ebido usoro nke ihe eji eme ya na ngwa.
una nnukwu obodo ndị ọrụ na ndị nyere onyinye nke otu nzukọ a ma ama siri ike na-akwado.
Nkọwapụta Onye Ọrụ Eserese (GUI) nke ukwuu customizable, dị nnọọ ka Windows, karịa GNOME na ndị ọzọ mara amara.
A na-ewerekarị ya dị ka nke abụọ kachasị akụ na-ewe ebe obibi Desktọpụ, wee GNOME.
Ọtụtụ mgbe choro eserese o ezigbo ihe ngosi ike iji gosipụta ọmarịcha njirimara nke njirimara Graphical na ịma mma ya niile (GUI).
Ọdịdị dị elu ya nke nhazi na nhọrọ nhazi ọtụtụ nwere ike ịghọ ihe mgbagwoju anya ma ọ bụ enwe ike ịda n'ihi mishandling.
para mụtakwuo Si na otu ị nwere ike ịga na njikọ weebụ ndị a:
KDE Project Official weebụsaịtị
KDE Plasma Official Nkebi
Ozi na Akụkọ maka ndị ọrụ
Ozi na Akụkọ maka ndị mmepe
Ọ bụrụ na onye nwere ugbu a GNU / Linux DEBIAN 10 nkesa (Buster) ma ọ bụ ndị ọzọ dabere na ya, dị ka MX-Linux 19 (ujo ojoo), nhọrọ ntinye ntinye kachasị akwadoro bụ:
Iji usoro iwu ihe aga-eme site na eserese eserese eserese (GUI)
Gbaa a Njikwa ma ọ bụ Ọnụ si Ebe obibi Desktọpụ
Gbaa ndị nye iwu na-esonụ:
Gaa n'ihu ruo ọgwụgwụ na Usoro Nduzi Tasksel (Task Selector).
Iji usoro iwu ihe aga-eme site na Usoro Nweta Iwu (CLI)
Gbaa a Njikwa ma ọ bụ Ọnụ na-eji Igodo Ctrl + F1 wee bido igba mgbọrọgwụ onye ọrụ.
Họrọ KDE Plasma Desktọpụ Environment na ihe ọ bụla ọzọ na ịba uru ma ọ bụ set nke nchịkọta ndị ọzọ.
Gaa n'ihu ruo ọgwụgwụ na usoro ndu de Ihe aga-eme (Task Selector).
Wụnye obere ngwugwu ndị dị mkpa ozugbo site na CLI
Gbaa a Njikwa ma ọ bụ Ọnụ si Ebe obibi Desktọpụ ma ọ bụ iji Igodo Ctrl + F1 ma bido oge ndi oru mgbọrọgwụ.
Gaa n'ihu ruo ọgwụgwụ na usoro eduzi Apt ngwugwu ngwugwu.
Cheta na: I nwekwara ike wụnye a Desktọpụ Environment dabere na KDE Plasma mfe ma ọ bụ zuru ezu site dochie ngwugwu kde-plasma-desktop site plasma-desktop, kde-standard o kde-full.
Ndị ọzọ dị iche iche nke ntinye 2 site na CLI
Omume ma ọ bụ mmeju
Igbu omume nke njikarịcha na ndozi nke Sistemụ nrụọrụ na-agba ọsọ ahụ nye iwu na-esonụ:
Reboot na nbanye site na ịhọrọ KDE Plasma Desktọpụ Environment, ma ọ bụrụ na inwe ihe karịrị otu Ebe obibi Desktọpụ arụnyere na ọ bụghị na-ahọpụta ndị Njikwa nbanye SDDM.
Cheta na: Mgbe nwalere KDE Plasma Desktọpụ Environment arụnyere, ị nwere ike iwunye ndị mgbakwunye ngwa ọdịnala na ngwa mgbakwunye dị mkpa nke otu, dika, dika imaatu:
Maka ozi ndị ọzọ agbakwunyere na ibe nke DEBIAN y MX-Linux, ma ọ bụ DEBIAN Administrator Manual online na nkwụsi ike ya.
Chetakwa, nke a bụ nke abụọ nke usoro banyere Gburugburu GNU / Linux. Nke mbụ gbasara GNOME na nke na-esote ga-abụ ihe dị ka XFCE.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Entorno de Escritorio» amara aha «KDE Plasma», nke amara na mbu dika «KDE», ọzọ nke kasị eji taa na ụwa nke «Distribuciones GNU/Linux», nwee nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » KDE Plasma: Kedu ihe ọ bụ na otu esi etinye ya na DEBIAN 10 na MX-Linux 19?
Kedu ụdị plasma ga-arụnye?
Daalụ Jlendres. Daalụ maka okwu gị. Onye nke inwere na reposito nke Distro gi ka awunye.
"Stabledị anụ ụlọ nke GNOME Desktop Environment ugbu a bụ nọmba mbipute 5.17."
Zaghachi ka mikelete
Daalụ Mikelete. Okwu gi a bu ezi okwu. Site na njikọ dị n'isiokwu a na-akpọ: Ozi na Akụkọ maka ndị ọrụ ị nwere ike iru akwụkwọ a kachasị ọhụrụ na ajụjụ a jụrụ: ọkwa nke ebupụta Plasma 5.17.5 ( https://kde.org/announcements/plasma-5.17.5.php?site_locale=es ).
Ndewo, echere m na isiokwu ahụ na-etinye nsụgharị nke desktọọpụ "GNOME", ma tinye KDE.
Ejirila njikọ mbụ nke isiokwu ahụ ụnyaahụ. Daalụ maka Ama ahụ!
Coral, ihe omuma nke ihe omuma nke Google dika RPI